ကျိန်စာ – Curses | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျိန်စာ – Curses
ကျိန်စာ – Curses
Posted by kai on Apr 26, 2019 in Creative Writing, Education, Myanmar Gazette |3comments
ကျိန်စာ အ‌ကြောင်း စုထားတာပါ..
စာဝန်တော်စိန်ခိုရဲ့ သစ္စာတော်ပေးအမိန့်တော်ပြန်တမ်း “
ငါ့ကျေဇူးသစ္စာတော်တိုင်းမတည်ဘဲ ဖောက်ပြန်ရင်လေးအသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီဆယ်ပါးအပြား၃၀ဖြည့်ခဲ့ကျင့်ခဲ့သော ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုစောင့်သောနတ်သတ်၍သေစေ။
သွားတော်၄၀ စွယ်တော်၄ချောင်း ညှပ်ရိုးတော်၁ချောင်းဓါတ်ပေါင်းရှစ်စရွတ်ကိုစောင့်သောတဲ့နတ် သတ်လို့သေစေ။
လကျ်ာရံ ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ လက်ဝဲရံရှင်မောဂ္ဂလန်စသော အသိတိရှစ်ကျိပ် ရဟန္တာအရှင်မြတ်တို့၏ ဓါတ်တော်မွေတော်ကိုစောင့်တဲ့နတ် သတ်လို့သေစေ။
ဘုရားသခင်ဟောတော်မူသော ဝိနည်း၅ကျမ်း၊သုတ်သုံးကျမ်း၊ အဘိဓမ္မာ ၇ ကျမ်း၊ ပိဋကတ်သုံးပုံ ဓမ္မက္ခန္တာအပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်ကျမ်းကိုစောင့်သောနတ်လည်း မနေနိုင်ဘဲသတ်စေ။
သာမဗေဒင် ယဇုဗေဒင် ဣရုဗေဒင် အထဗ္ဗနဗေဒင်စတဲ့ ဗေဒင်၄ပုံကိုစောင့်သောနတ်လည်း သတ်စေ။
ကျွန်းကြီး၄ ကျွန်း၊ ကျွန်းငယ်နှစ်ထောင်စတဲ့ကျွန်းအပေါင်းကိုစောင့်တဲ့နတ်လည်းသတ်စေ။
မြစ်ကြီးငါးသွယ်၊ မြစ်ငယ်ငါးရာ၊ အင်းအိုင်ချောင်းမြောင်းအပေါင်းကိုစောင့်တဲ့နတ်လည်း မနေဘဲ သတ်စေ။
ဟိမဝန္တာ တောသုံးထောင်အပါ အာကာသကိုအစိုးရတဲ့နတ်၊ ဗိဿနိုးနတ်၊ ဘုတ်ပြိတ်နတ်လည်း မနေဘဲ သတ်စေ။
ထို့ပြင် နတ်အများသတ်၍တာတောင် မသေသေးဘဲသွေးခဲသွေးနက် ပွက်ပွက်ထွက်၍ ကိုယ်လက်ပြောင်းပြန် သွေးခဲအန်၍ သေစေ။
ဘေးရှစ်ပါး ဒဏ်၁၀ပါးကြောင့်လည်း လတ်လတ်ချက်ချင်းသေစေ။
သားစဉ်မြေးဆက် ဥစ္စာပစ္စည်းလည်း မကြာခဏပျက်ဆီးပြီး ဆီးမီးတန်ဆောင် တုံးသွားသကဲ့သို့ အကုန်မကြွင်းမကျန်ပျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်စေ။
ဒါမှမဟုတ် ရေလမ်းခရီးသွားရင်လည်း ရေသတ္တဝါဆယ်ကုဋေရှိတဲ့အထဲမိကျောင်း၊လင်းပိုင်၊ နောက်ဆုံး ညံသတ္တဝါအထိ စားခြင်းခံရပြီးသေစေ။
ကုန်းလမ်းခရီးကသွားရင်လည်း သစ်၊ကျား၊ဆင်၊ရဲ၊စိုင် စတဲ့ ကိုးကုဋေသော သတ္တဝါတို့စား၍ သေစေ။
မြွေပွေး၊မြွေဟောက်၊ ငန်းကျား၊ ငန်းပြောက်အပါဝင် ပေါက်၍သေစေ။
အဲ့လို နတ်တွေကသတ်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့သေ၊ ဒါမှမဟုတ် သတ္တဝါတွေစားခြင်းခံရကာ သေပြီးနောက်
ငရဲကြီးရှစ်ထပ်၊ ငရဲငယ်တစ်ရာနှစ်ဆယ့်ရှစ်ထပ်၊တိရန္တာန်ပြိတ္တာ အသူရကယ်အပါယ်၄ပါးအထိ ရောက်စေ။
ထို့နောက် ငရဲကလွတ်လာလို့ လူပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင်လူချင်းမတူ နူဖြူနူဆွတ် မုန်ညှင်းပွတ်အဆင်း ခရုသင်းစွဲပြီး ဘက်သကပ် ဘက်သခြာ အနာလည်းစွဲစေ။
ထို့ပြင် မိခင် ဖခင်လို့ဘယ်လောက်ပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ခေါ်စေကာမူကွေးသောလက်မဆန့်ခင် ဆန့်သောလက်မကွေးခင် သေစေ။
ဒါ့အပြင် မင်းပြစ်မင်းဒဏ် အမတ်ဗိုလ်ပါတို့၏အပြစ်စွဲရာကနေခြေလက်မပြတ်တပြတ် လည်ဦးခေါင်းလည်း ထောင်းထောင်းကြေပြီး လတ်တလောချက်ချင်းသေစေ။
သားစဉ်မြေးဆက် ကျေးကျွန်အဆုံး အဆင်းရဲကြီးဆင်းရဲပြီးခွက်စွဲကာ စားချင်သမျှ တောင်းစားရာဘဝကျရောက် လူလည်း အလှတရားမရှိဘဲ လူပြိတ္တာ ဖြစ်စေ။
နောက်ဆုံး ရှိရှိသမျှ အရာတွေနဲ့ကျိန်စာတိုက်လို့အားမရဘဲ
မင်းအနန္တသူကျောက်စာပါ ကျိန်ဆိုခြင်းကဲ့သို့ ထင်းကိုမီးလောင်ရာ တစစ တိုသလို တိုစေ။
” ရာဇကုမာရ်ကျောက်စာပါ ကျိန်စာ”
ငါ့နောင်အား ငသာလည်ဂေါင်၊ ငါမ္လိယ်လည်ဂေါင်၊ငအဆုယ်လည်ဂေါင်၊ သူတစ်ထူလည်ဂေါင်၊ ဣယ်ပုရှာအာ ငာလှူခသု ကျောန် အနှိပ်အစက်တေယ်မူမုကာ။အရိမိတ္တယာပုရှာသ္ခင်အဖူရစိယ်။
ငါလှူခဲ့တဲ့အလှူနဲ့တကွကျွန်တို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့ရင် အရိမေတ္တေယျဘုရားသခင်ကိုမဖူးစေ ဟု ကျိန်ဆိုခဲ့တာတွေ့ရတယ်။
“တူရွင်းတောင်ဘုရားကျောက်စာ ကျိန်စာ “
အလှူရှင်က သူလှူခဲ့တဲ့အလှူကိုဖျက်သူဟာမိမိဆွေမျိုး၊ သားမြေးမြစ်ဖြစ်စေ သူစိမ်းဖြစ်စေ မခွဲခြားဘဲ ညီတူမျှတူအပြစ်ခံစေရန်
သာမ္လိယ်(တွ)င်လည္ကောင် သုလည္ကောင် လုစမုကာအဝစိယ်ကာအာထက် လုစ(မု)သောကာ သြက်ဖ္လစ်စိယ်သာတေ။
ဆိုပြီး သားပင်ဖြစ်စေ သူတစ်ပါးဖြစ်စေအလှူကိုလုစားလျှင် အဝီစိကားအထက် လုစားသူကအောက်ဖြစ်စေ လို့ကျိန်ဆိုခဲ့တယ်။
“ညောင်ရမ်းကြီးသမီးကျောက်စာ( မြောက်ဘက်ကျောက်ချပ် ) ကျိန်စာ”
ညောင်ရမ်းကြီးသမီးက ခင်ပွန်းဖြစ်သူကင်္ကသူအနိစ္စရောက်ပြီး သုံးရက်မြောက်မှာအလှူကြီးပေး ရေစက်သွန်းချအလှူပြုပုံကိုရေးထိုးတာဖြစ်တယ်။ဒီကျောက်စာမှာအလှူပြုရခြင်းရည်ရွယ်ချက်၊အလှူပစ္စည်းစာရင်း၊ အလှူပြုပုံအဆင့်ဆင့်ကိုရေးထိုးထားပြီး၎င်းလှူထားသောကျောင်း၊လယ်နှင့်ကျွန်တို့ကိုလုယက်ဖျက်ဆီးသူသည်
လုစလတ်သော နိုင်ထက်ဖျက်ဆီလတ်သောသူကာ။မ္လစ်သြက်ဖက်မှသော က္လောက်စာတွင် ဖုန်မကြီစိယ် အသက်မရှည်စိယ်သတေ။ဟုသကစသော မျာစွာသော ငာကိန်သောအကိန်သင်ရုယ်။ ဥိခောင်္ထာရာမသီ ပျက်စီပြုန္တီရုယ် နှစ်မကူ လမပ္လန် ကြီစွ၂သော ဖိုယ်ဖျံရောက်ရုယ်သိယ်စိယ်သတေ။
ဟု လုစားသောသူ နိုင်ထက်ဖျက်ဆီးသောသူကားဘုန်းမကြီးပါစေနှင့်၊ အသက်မရှည်ပါစေနှင့် စသဖြင့် မြောက်ဘက်ရှိကျောက်စာတွင်ရှိ သူကျိန်ထားသောအကျိန်ပေါင်းများစွာသင့်၍ ဦးခေါင်းထားရာ မသိပျက်ဆီးပြုန်းတီးပါစေ။ နှစ်မကူးလ မပြန့်ကြီးစွာစွာသောဘေးသင့်သေပါစေ။လို့ကျိန်ဆိုခဲ့တာတွေ့ရမယ်။
“ညောင်ရမ်းကြီးသမီးကျောက်စာ (တောင်ဘက်ကျောက်ချပ်) ကျိန်စာ”
ငာဆုယ်တွကျင်္င်လည်ကောင် ငသ္ခိင်မင်ဧအဆုယ်တွင်ကျင်လည္ကောင်ပ္လသူင်္လည်ကောင် ရဟန်လည်ကောင် လူလည်ကောင် မိယ္မ်လည်ကောင် ယောက္ကျာလည်ကောင်။ လုစလတ်သော နိုင်ထက်မူလတ်သောသူကာ။လူတွင်ဖုန်မကြီစိယ် အသက်မရှည်စိယသတေ။ မိဖိုယ် ရိယ်ဖိုယ် မုကြိုင်ပုဆိန်ဖိုယ် ဆင်ဖိုယ်မြင်ဖိုယ် မြုယ်ဖိုယ် သစ်က္လာလဝံဖိုယ် သမာကုရှယ်မတတ် ရ ျာသောအနာဖိုယ်ကြီစွာ၂ လျှင်္သရုင်္ယ်ဖတ္တလတ်သိယ်စိယ်သတေ။သုခဲအန်ရုယ်သိယ်စိယ်သတေ။ သိယေ်ာသလေ အဝိစိယ်မည်သော ငြယ်ကြီလျှကျင်္က်စိယ်သတေ။ ပုရှာအဖ္လစ်၂လေမဖူစိယ်သတေ။ကြံမာအာ လူဖ္လစ်ငြာတုံသောလေ။ နူသောဝယ်သော ကီသောကန်သော နာပင်္သော အသောရူသော ထုံလှီသော ခြိယ်လက်တိုဝ်သောနာနှာခောင်တိုဝ်သော ပုဆိုဝ်ခြံလည်လျှင်ပတ်ရုယ် ဖုန်စသောလေ မစာရတတ်သော လူတွင်သူမခံသောကြံမာခံသော လူပြိတ္တာလျှင် ဖ္လစ္စိယ်သတေ။ မ္လိယ်ကြီကံဖာကာအထက် အယင်လုစသောသူကာ သြက်ဖ္လစ္စိယ်သတေ။
ဟု “ ငါ့အဆွေလည်းကောင်း၊ ငါ့ခင်ပွန်း၏အဆွေလည်ကောင်း၊ပြင်လူလည်းကောင်း၊ ရဟန်းလည်းကောင်း၊လူလည်းကောင်း၊ မိန်းမလည်းကောင်း၊ယောက်ျားလည်းကောင်း၊လုစားလတ်သော၊နိုင်ထက်မူလတ်သောသူကားလူတွင်ဘုန်းမကြီးစေ အသက်မရှည်စေသတေး။ မင်းဘေးသင့်စေသတေး၊ မီးဘေး၊ရေဘေး၊မိုးကြိုး ပုဆိန်ဘေး၊ဆင်ဘေး၊ မြင်းဘေး၊ မြွေဘေး၊ သစ်ကျားလူဝံဘေး၊ ဆင်ဘေး၊ သမားကု၍ မတတ်ရာသောအနာဘေးကြီး စွာစွာလျှင်သင့်၍သေစေသတေး။ သွေးခဲအန်၍သေစေသတေး။ သေသော်အဝီစိ ငရဲကြီး၌ ကျက်စေသတေး။ ဘုရားအဖြစ်ဖြစ်လည်းမဖူးစေသတေး။ ကုသိုလ်ကံကြမ္မာအလျောက် လူဖြစ်ငြားတုံသော်လည်း နူသော ၊ ၀ဲသော ၊ ကျိုးသော၊ကန်းသော၊ နားပင်းသော၊ အသော၊ ရူးသော၊ တုံလှီသော၊ ခြေလက်တိုသော၊ နား၊နှာခေါင်းတိုသော၊ပုဆိုးကြမ်းလည်လျှင်ပတ်၍ ဖုန်း(တောင်း)စားသော်လည်း မစားရတတ်သော လူပြတ္တာလျှင်ဖြစ်စေသတေး။မြေကြီးကမ္ဘာကားအထက် အယင်လုစားသောလူကား အောက်ဖြစ်စေသတေး။
“ပုဂံခေတ် ဥဇနာမင်းလက်ထက် အသဝတ်ဓမ္မာသင်္ချိုင်းဂူဘုရားကျောက်စာ ကျိန်စာ”
အသဝတ်ဓမ္မာအမတ်ကွယ်လွန်တော့ ဇနီးဖြစ်သူစောလှဝန်းက သချင်္ ိုင်းဂူဘုရားတည်ပြီးအလှူပြုပေးတဲ့မှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒေဝဒတ်ခံရသော ငရဲထက်ဆိုးသော အဆအရာ အဆရာအထောင်အဆအသိန်း တပြောင်းပြန်ပြန် ငရဲကျပါစေ။
လှူထားသောလယ်ကိုစားရသည်ရှိသော် ယောကျ်ား၊မိန်းမတို့သည်အလျားအနံ အရပ်၆၀ အသွားထူသည့် ကျောက်ဖျာကြီးမှာ ခါးတိုင်အောင် နစ်နေသော ရေလဲမရအစာလဲမရလျှာငါးလံထွက်၍ခံစေ
mail ပုိ႔ထားပါတယ္ စာျပန္ပါဦး top ten 1သိန္းနဲ႔ပက္သက္လုိ႔ပါ
Already replied. Check in the Spam folder.
က်ေနာ့္ဖုန္းက ေဇာ္ဂ်ီဘာသာပဲ တတ္သလား မသိ!
စာလံုးေတြ ကေမာက္ကမပဲ ျမင္ရတယ္။
အဲ အခု မန့္ထဲက်ေတာ့ ေရးတာ မွန္ လို႔